SMF Forum Software မှာ Burglish Textarea ကို ဘယ်လိုထည့်သွင်း အသုံးပြုရ - MYSTERY ZILLION
SMF Forum Software မှာ Burglish Textarea ကို ဘယ်လိုထည့်သွင်း အသုံးပြုရ
June 2008 edited September 2008 in Other
ကျွန်တော် ဟာ flino.net ဆိုတဲ့ ဆိုက် ကို မွေးဖွား ဖို့... ကြံစည် နေ တာ ကြာပါပြီခင်ဗျာ..
အခုတော့ offline မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်
အဲဒီမှာ ကျွန်တော် forum လေး ထည့် သွင်း ချင် လို့ပါ...
smf forum software ကို အသုံး ပြုထား ပါ တယ် ..
အဲဒီ ဖိုရမ်မှာ burglish textarea လေး ကို ထည့် သွင်း အသုံးပြုချင် နေ တာ ကြာ ပါပြီ..
အဲဒါ ဘယ် လို လုပ် ရမလည်း ဆို တာ လေး ကို သိကြသူများ..
အကူ အညီပေး ကြပါရန်.. တောင်းပန်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ...
ကျေးဇူး အထူး ပါ..
chitminyu wrote: »
ဒီမှာ step by step embeding example ရှိပါတယ်။
ဟုတ် ကဲ့ ခင်ဗျ..
ကျွန်တော် ဖတ်ပြီး လုပ် ကြည့်ပြီးပါပြီခင်ဗျ...
မရဘူး ဖြစ်နေတယ် ခင်ဗျ....
SMF အတွက် သက် သက် ရေးပေးမှ ပို အဆင် ပြေလိမ့်မယ်ထင်တယ်ခင်ဗျ...
ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆို တော့.. ကျွန်တော် က php လည်း မတောက် တ ခေါက်..
js လည်း မတောက် တခေါက်မို့လို့ပါ...
ဟီးဟီး။ ကျနော် SMF မသုံးဖူးဘူးခင်ဗျ။ ဒါနဲ့ burglish textarea က RichText box တွေ WYSIWIG Textbox တွေမှာ အလုပ်မလုပ်ဘူးနော်။ plain html textarea မှာဘဲအလုပ်လုပ်တယ်။
ဟုတ် ကဲ့ ရိုးရိုး html textarea ပါပဲခင်ဗျာ...
ကျနော်လဲ အခုတလော သိပ်မအားဘူးဗျာ။ တစ်ယောက်စီအတွက်တော့ customize လုပ်ပေးနိုင်မယ်မထင်ဘူး။
ကိုယ်ဘာသာကိုယ် လုပ်ကြမှဖြစ်မယ်။ တစ်ခုပဲ။ username / password စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပေးမယ်။ ရမယ့်လို့တော့ အာမ မခံနိုင်ဘူး။
link >> http://flino.net/forum/
username : chitminyu
password : chitminyu
ကျနော် textarea ဒီလိုတွေ့ပါတယ်..
<textarea onchange="storeCaret(this);" onkeyup="storeCaret(this);" onclick="storeCaret(this);" onselect="storeCaret(this);" cols="60" rows="12" name="message" class="editor"/>
name တစ်ခုပဲတွေ့ပါတယ်။ id="message" ဆိုပြီးထပ်ထဲ့ပေးပါ။ id မပါရင် Burglish Textarea က အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
<textarea onchange="storeCaret(this);" onkeyup="storeCaret(this);" onclick="storeCaret(this);" onselect="storeCaret(this);" cols="60" rows="12" name="message" id="message" class="editor"/>
နောက်ပြီး SMF 1.0.8. လို့တွေ့ပါတယ်။ SMF 1.1.5 ကို အပ်ဂရိတ်လုပ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။
SMF 1.1.4 အထိ Normal User ကနေ Admin ဖြစ်အောင် Hack လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဟုတ် ကဲ့ ပါ အကို တို့ရေ.. စမ်းကြည့်လိုက်ပါ ဦးမယ်...
အခုလို ကူညီ ကြတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ.
ကျွန်တော်က fireboard သုံးပါတယ်။
အဲဒီမှာကော burglish ထည့်လို့ရလားဟင်
နောက်ပြီး ကိုမာ့ခ်တို့အားရင်၀င်ကြည့်ရအောင် username , password ကဘယ်လိုစီစဉ်ပေးရမှာလည်းဟင်
admin account လား ၊ အချိန်ကုန်သက်သာအောင် activate လုပ်ပြီးသား account တစ်ခုကို စီစဉ်ပေးရမှာလားဆိုတာ မသိလို့ပါ။
plain textarea ဆိုရတယ်ဗျ။ ကျနော် အင်တာနက်ထဲရှာကြည့်တာတော့ Joomla ကထုတ်ထားတာလားမသိဘူး။ ကြည့်ကြည့်တာတော့ ရမယ့်ပုံပဲဗျ။
css, တွေ js တွေ ထပ်ထည့်ရမှာဖြစ်လို့ admin access ရှိတဲ့ အကောင့် ခနပေးနိုင်ရင် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်လာစမ်းပေးပါမယ်။ နောက် ပတ်စဝေါ့ ပြန်ပြောင်းပေါ့။
ကျွန်တော်က mybboard forum ကိုသုံးတယ်ဗျ အဲဒါ အစ်ကိုပြောတဲ့ RichText box ကို WYSIWIG နဲ့ သုံးလို့ရနိုင်မလား မသိဘူး ကျွန်တော်က ပိန်းတယ်ဗျ သေချာလေး ရှင်းပြပေးပါနော်
chitlar wrote: »
အဲ။ burglish testarea က RichTextbox ရော WYSIWIG နဲ့ရော အလုပ်မလုပ်ဘူးလေ။
မဟုတ်ဘူးလေ အစ်ကိုရ ကျွန်တော်ပြောတာကလဲ burglish text ကို သုံးမှာမဟုတ်ဘူး အခု ဆော့စ်၀ဲ install လုပ်ထဲက ပါလာတဲ့ text editor ကိုမကြိုက်လို့ WYSIWIG ကို ပြောင်းချင်တာ အဲဒါကိုမေးတာဗျ ဟီးဟီးးးးးးးးး :D:D
ပြန်ဖြေပေးဦးလေဗျာ step by step လေး :D:D
ပြန်ဖြေပေးဦးလေဗျာ Step By Step လေး :d:d:d
ဟုတ်ဘူးလေ။ ကျနော် အဲတာတော့ မသိဘူးပြောတာ။
ကျွန်တော်တင်လိုက်တာ ရသွားပြီဗျ ပေါ်လာပြီ ဒါပေမယ့် ပို့စ်တင်တိုင်း Authorization code mismatch. Are you accessing this function correctly? Please go back and try again. အဲလိုပဲ ပြောနေတယ် သူပေးတဲ့ Read me ကိုပဲ ဖတ်ပြီးလုပ်တာပါ ဘာမှားနေလဲ မသိဘူး ကယ်ကြပါဦးဗျာ (:((:((:((:((:((:((:((
နဲနဲစောင့်ပေးပါခင်ဗျာ။ ကျနော် တတ်နိုင်သလောက် ဒီတစ်ပတ်ထဲ ကြည့်ပေးမယ်။
Sorry! sorry, sorryamillion.
(all lower case letters):D:D:D
ဟုတ်ပြီ ဝင်လို့တော့ ရပြီ။ ဘယ်ပေ့ချ်မှာ Burglish input သုံးချင်လဲဆိုတာ လင့်ခ် လေးတစ်ချက်လောက်ပေးပါ။ Joomla ထဲမှာ လိုက်ရှာရမှာ မို့လို့ပါ။
I want to add text area to forum page. I don't know how to give link.
Can you explain me, plz?
စာရိုက်လို့ရတဲ့ အဆင့်တော့ ရောက်သွားပါပြီ။ ဇော်ဂျီ ကီးဘုတ်လဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
၁။ media manager ထဲမှာ script ဖိုင်တစ်ချို့upload လုပ်ထားတယ်။
၂။ template ထဲက HTML မှာ ကုတ်တွေထည့်ထားတယ်။
UI ပိုင်းနဲ့ မလိုတဲ့ button တွေဖြုတ်ချင်တာတွေပါတွေ ရှိရင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ စမ်းကြည့်ကြပါ။
တစ်မနက်လုံး ဝင်လုပ်ပေးနေတာ တွေ့တယ်
ခုလိုကူညီတာ forum member တွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီ
ကိုမာ့ခ် ကျမ်းကျမ်း မာမာ ချမ်းချမ်းသာသာ နဲ့ MZ security အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါစေ
နောက်ထပ်လည်း အများအကျိုးဆောင်နိုင်ပါစေဗျာ :77: